Cristiano Ronaldo oo markale xalay ka gambaday laad xor ah oo laga dhaliyey Kooxdiisa Juventus & Tababare Andrea Pirlo oo ka hadlay arrintaas – Gool FM
(Turin) 22 Abriil 2021. Weeraryahanka Kooxda kubadda cagta Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa xalay markale la kulmay eedeyn kaddib markii uu ka dambaday laad xor ah oo laga dhaliyey kooxdiisa Juventus, iyadoo tababarihiisa Andrea Pirlo uu ka hadlay arrintaas.
Hadda CR7 waxa uu og yahay inuusan ku fiicnayn oo uu ku liito xirashada bareelka ama darbiga ay xiddiguhu xitaan inta aan laadka xorta ah la tuurin ka hor, waxaana macquul ah inay xalay ahayd markii ugu dambeysay oo uu laadka xorta ah ka difaaco kooxdiisa.
Waxaa Ronaldo lagu sheegay inuu yahay khiyaanoole kaddib markii uu ka sii jeestay bishii hore laad xor ah oo ay kooxda FC Porto ka dhalisay Juventus, kaasoo sabab buuxda u noqday inay ka haraan tartanka Champions League.
Sidoo kale xalay ayuu ka gambaday laad xor ah oo lagu tuuray kooxdiisa, kulankan oo qeyb ka ahaa horyaalka Serie A ayaa goolka lagu bilaabay inkastoo Juventus ay guul soo laabasho ah oo 3-1 ah ka gaartay Parma.
Kooxda Parma ayaa hoggaanka ku qabatay laad xor ah oo ay uga mahadcelinayaan Cristiano Ronaldo oo ka gambaday kubadda ka hor inta aysan dhalan.
Brugman ayaa tuuray laadkaas xorta ah, waxaana ay kubadda sii dulmartay Ronaldo oo u muuqday mid gambaday oo wajigiisana gacanta ku dabooshay, isagoo xitaa aan kor u boodin sida xiddigaha kale ee garab taagnaa, goolhaye Gianluigi Buffon oo shabaqa ugu jiray JUve ayaana heli waayey fursad uu kubbadaas ku difaaco.
Dhinaca kale Tababaraha Kooxda kubadda cagta Juventus ee Andrea Pirlo ayaa la weydiiyey kaddib kulankaasi haddii eedda goolkaas dhashay ee daahfurka u ahaa ciyaarta uu leeyahay Ronaldo waxaana uu yiri:-
“Waa nasiib-darro, waxyaabahani oo kale waa ay dhacaan, laakiin waan qiimayn doonnaa doorkiisa ka mid ahaanshaha xirasahada laadadka xorta ah maalmaha soo aaddan.”